Ukusetyenziswa kweentsuku ezingama-0 Windows 10
Wenza ntoni xa ufumanisa umngxunya wokhuseleko omtsha ngaphakathi Windows 10 okanye iOfisi okanye enye imveliso yeMicrosoft? Kutheni, uyayithengisa, kunjalo. Yiyo loo nto, ukunyuka kweentsuku ezi-0.
Xa umntu ebhala inkqubo enobungozi esebenzisa umngxunya wokhuselo osanda kufunyanwa- umngxunya angaziwa ngumvelisi wawo - inkqubo enobungozi yile Iintsuku ezingama-0. (Aba-Fuddy-duddies bayibiza ngokuba yi-zero-day exploit.
Iintsuku eziyi-0 zixabisekile. Ngamanye amaxesha, ibaluleke kakhulu. Inkqubo ye- Inkampani encinci ye-antivirus unenkxaso - UkuPhawulwaPoint -Okuthenga ukuxhaphaza kwiintsuku eziyi-0. I-TippingPoint isebenza kunye nomenzi wesoftware ukuza nokulungisa ukuxhaphaza, kodwa kwangaxeshanye, ithengisa abathengi benkampani ukukhusela kwangoko ngokuchasene nokuxhaphaza. Injongo yeTippingPoint ye- Iphulo loSuku lweZero kukubonelela abathengi bethu ngeyona nkqubo yokuthintela ungenelelo lwehlabathi kunye nokukhuseleka konxibelelwano oluhlanganisiweyo. I-TippingPoint inikezela ukuya kuthi ga kwi-10,000 yeedola kumngxunya okhuselekileyo.
Kukho amarhe okuba iisayithi ezininzi ezingaphantsi kobukrelekrele zilungiselela ukuthengwa nokuthengiswa kwemingxunya yezokhuseleko. Kuyabonakala ukuba, iqela labarhwebi baseRussia elafumanisa ukuba sesichengeni kwindlela iWindows ephatha ngayo iifayile zemizobo yeWMF ithengise umngxunya wayo omtsha nge-4, 000 yeedola, ingaqondi ukuba ingenza okungaphezulu. Ngo-2012, Imagazini iForbes iqikelele ixabiso leentsuku eziyi-0 ukusukela kwi- $ 5,000 ukuya kwi- $ 250,000.
Izibonelelo zihlala zikhula. Ukhuphiswano lwePwnium lukaGoogle unikezela ukuya kuthi ga kwi-2.7 yezigidi zeedola ngokuchasene ne-Chrome OS yayo, kunye neebhonasi ezibalulekileyo zezinye iintanda. I-Zero Day Initiative (esuka kwi-TippingPoint) ngoku ibonelela ngaphezulu kwe-500,000 yeedola kwimali yebhaso yezona zinto zintle kukhuphiswano lwe-Pwn2Own- kunye ne- $ 400,000 eyongezelelweyo kwi-Mobile Pwn2Own eyahlukileyo.
Ngoku ka Forbes, ezinye iiarhente zikarhulumente zisemarikeni. Ngokuqinisekileyo oorhulumente bathenga ukuxhaphaza ngeentsuku ezi-0 kwinkampani eyaziwayo yeentsuku ezi-0. Ingxaki (abanye banokuthi ithuba) iya isiba mandundu, ingcono. Oorhulumente ngoku bahletywa ngokubanzi ukuba banamawaka - abanye babo, amashumi amawaka - abagciniweyo kusuku lwe-0.
Uzikhusela njani kwiintsuku ezingama-0? Ngandlel 'ithile, ngekhe: Ngokwenkcazo, akukho mntu ubonayo ukuza kweentsuku eziyi-0, nangona uninzi lweemveliso ze-antivirus zisebenzisa uhlobo oluthile lokufumana ubundlobongela oluzama ukubambelela kugonyamelo olusekwe kuphela kukuziphatha kwenkqubo ekhubekisayo. Kakhulu, kufuneka uthembele kukhuseleko lwengqondo eqhelekileyo.
Isebenza njani i-baclofen
kutheni ungaseli kwii-antibiotics
I-hylatopic kunye ne-cream generic
thumela umyalezo kwifowuni yam
b972 ipilisi eluhlaza okwesibhakabhaka ngexabiso lesitalato